Xaaladda adag ee nolosha | Suomen Mielenterveysseura
+ Xaaladda adag ee nolosha
Qofka noloshiisa waxaa soo food saara xaaladdo nolol adag oo kala gedisan. Xaaladaha qofka soo mara waxaa ka mid ah kuwo wanaagsan oo farxad leh, kuwo yara adag iyo waqtiyo aad u adag. Sidoo kale dareenka dhibaatada xaaladaha kala duwan waa dareen qofba uu si u dareemo, sidaa daraadeed xaaladahaas kala duwani waxay nolosha ku abuuri karaan dareen aan fududeyn.
Qof walba wuxuu leeyahay qaab-dhaqan uu ku xaliyo xaaladaha adag ee nolosha kala soo dersa: mararka qaar sida qofku uu u wajahayo dhibka waxay ku xidhan tahay dhibaatada. Tusaale, haddii ardaygu dhibaato kala kulmo iskuulka xalkeeda waxaa lagala hadli dadka waaweyn, haddii qofka ay soo wajahdo dhibaato dhaqaalena xalku wuxuu ku jiraa in qofku dib u eego xaaladiisa dhaqaale iyo isticmaalka lacagtiisa. Badanaa marka qofku dhibaateysan yahay kaalmada qaraabadu waa u muhiim.
Kalkaaliyaha caafimaadka dhimirka Ofra Ayalon ayaa diiwaan gareysay qaababka kala duwan ee qofku uga badbaado dhibaatada. Dadku waxay leeyihiin awood ah in ay isticmaalaan qaabab kala duwan oo dhibaatada looga badbaadayo, tusaale qofku wuxuu isku mar noqon karaa qof dareenkiisa muujiya sidoo kale hadana adkeysta sidaasna ku badbaada. Hadaba adigu qaababka soo socda kee ayaad isku tirinaysaa?
Ku badbaadaha dersida arinta si deg-deg ah
Qofka ah ku badbaadaha dersida arinta si deg ah, isla markaasba xaalada ayuu dersaa. Wuxuu uruuriyaa akhbaaraha waxa dhacay, wuxuu arinta ka eegaa dhinacyo badan, wuxuuna isku dayaa inuu helo fikrado cusub oo arinta khuseeya. Wuxuu arimaha u diiwaan gareeyaa sida ay u kala muhiimsanyihiin, wuxuuna ka fekeraa talaabada xigta ee uu qaadayo, waxa aan loo baahneyn in la qabto iyo waxa xiligga la joogo muhiimada kowaad mudan.
Ku badbaadaha dereen muujinta
Ku badbaadaha muujinta dereenkiisa, wuxuu dereenkiisa ku muujiyaa tusaale inuu ooyo ama qoslo, sidoo kale dereenkiisana wuu sheegaa. Qofkan dareenkiisu ma qarsoona, wuxuu sidoo kale dareenkiisa ku muujin karaa isagoon hadlin sida inuu wax sawiro, garaacid muusikada iyo si ciyaar ahaan ah inuu ku soo gudbiyo.
Ku badbaahada dhexgalka bulshada
Qofkan wuxuu bushada kale ka raadsadaa kaalmo, bulshada ayuu dhexgalaa doorna ku yeeshaa. Waxaa laga yaabaa inuu isku taxalujiyo inuu wax abaabulo. Qofka ah ku badbaadaha bushada kaalamada dadka kale wuu qaataa isaguna wuu kaalmeeyaa dadka.
Ku badbaadaha inuu dhinacyo badan wax ka eego
Qofkan dhinacyada badan wax ka eega, wuxuu adeegsadaa maskaxdiisa, wuxuu isku dayaa inuu ka hakado waxyaabaha xusuusinaya wixii dhacay ama wuxuu isku dayaa inuu dhibaatada la soo deristey xal u helo. Wuxuu badanaa isku dayaa inuu dhinaca wanaagsan wax ka eego, wuxuu fasirtaa riyadiisa, wuxuu aaminsanyahay fekerkiisa, wuxuuna is tusaa qaab uu uga gudbo dhibaatada.
Ku badbaadaha inuu si qoto dheer wax u eego
Qofkan sida qotoda dheer arimaha u eega, noloshiisa tusaale waxaa qeyb weyn ka ah diinta, xil iska saarida bulshada ama qaab nololeedka bulshada ama u fekerkeeda.
Ku badbaadaha inuu wax qabto
Qofkanwuxuu sameeyaa wax qabad iyo dhaqdhaqaaq badan, wuxuu isku dayaa inuu nasto, inuu waxna cuno inbadana jiifo. Qofkan ah ku badbaadaha wax qabadka sidoo kale waxaa muhiim u ah inuu meelaha aan buuqa lahayn sida keymaha dhex socdo.